Mayelana NATHI - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
I-MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTDesungulwe ngonyaka we-2009, umkhiqizi wezinto zokusebenza ze-tattoo eChina, unikeza umugqa ogcwele wezinto zokusebenza ze-tattoo nezinsiza. Inaliti ye-Tattoo, i-Tattoo Cartridge, i-Tattoo Machine, i-Tattoo Kit, i-Tattoo Ink, i-Grip elahlwayo, i-Tip elahlwayo, i-Power Supply, i-Medical Supplies, i-Tattoo Studio Supplies, i-Piercing Supplies, i-Makeup Supplies njalonjalo.
Umgomo wethu oyinhloko ukunikela ngamakhasimende ethu ukulethwa okusheshayo, insizakalo enobungani neyobungcweti nemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ukwakha ubudlelwano besikhathi eside namakhasimende ethu ngokususelwa kwikhwalithi yemikhiqizo yethu ngentengo yefektri yokuncintisana.
Senza insizakalo ephelele nemikhiqizo esezingeni eliphezulu. Kusukela kubaqalayo be-tattoo kuya kubaculi abaProfessional, imikhiqizo yethu iheha ukunakwa kwabo. Yamukela noma yimiphi imibono neziphakamiso ezivela kumakhasimende ethu abalulekile. Sizoqhubeka nokwenza ngcono umkhiqizo wethu kanye nensizakalo.
Sikhonza i-USA, Canada, Europe, Asia, South America, Australia, New Zealand, Middle East amazwe, South Africa kanye nazo zonke ezinye izindawo zomhlaba jikelele.
Ithimba lethu lisebenza kahle futhi linobungane, sicela uxhumane nathi mahhala uma unombuzo.
Siyakwamukela ku IMPAHLA YOKUTHOLA I-MOLONG, inkampani yethu ingumhlinzeki oholayo wemishini ye-tattoo e-China, egxile ezinhlotsheni ezahlukahlukene zempahla ye-tattoo.
Sinesipiliyoni seminyaka ekukhiqizeni izinaliti zeTattoo, Izinaliti zeTattoo Cartridge, Umshini weTattoo, amaGrips, amathiphu, Ukunikezwa kwamandla, inkinobho yezinyawo, i-Clip Cord njll.
Sinikeza imishini ye-tattoo esezingeni eliphakeme ngentengo engcono. Nikeza amakhasimende emhlabeni wonke ukukhetha okuhle ukujabulela imikhiqizo emangalisayo.
Inkampani yethu itholakala eFloor # 2 Isakhiwo # 9 Zongtang District 1 Yiwu Zhejiang China 322000
Umkhiqizo wethu: MO, LBB, WhatsBravo, Flame, HRK, Hurricane Tattoo Needle.
Uyemukelwa ukuthi ukhulume ngokuba yi-ejenti yokuthengisa yemikhiqizo yethu yokuthengisa ukuze uthengise kuphela ezweni lakho noma esifundeni sakho uma izimo zifinyelelwe. Futhi singenza insizakalo ye-OEM yemikhiqizo yamakhasimende ethu.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane uma unentshisekelo kumikhiqizo yethu. Ilinde imibuzo yakho, ukwakha ubudlelwane bethu bebhizinisi besikhathi eside, kwenze ibhizinisi lethu likhuphuke futhi linyuke.